Ifulethi elingaphezulu e-Century Old School House! - I-Airbnb
Ifulethi elingaphezulu e-Century Old School House!
Le ndlu yesikole esidala iyigugu elifihliwe. Lesi sakhiwo sigcinwe ekugcineni kwe-'School Lane' futhi manje sekuyikhaya lefulethi eliphezulu kanye namahhovisi enhlangano esiza umphakathi wendawo.
Le loft enhle ekhanyiswe yilanga ibuyekezwe ngokulungiswa kwesimanje kodwa igcine yonke intelezi yayo yomlando.
Inekhishi elinomqondo ophelele ovulekile, igumbi lokugezela elihle elinebhavu yakudala ye-clawfoot, usilingi olungamamitha angu-14, i-TV ene-Netflix + negumbi lokulala elithokomele elikhanyiswe yilanga - uzobe usekhaya.
Lesi sikhala esihle siyazikhulumela.
Amafasitela aphansi kuya kusilingi achitha ukukhanya kwemvelo kuwo wonke ama-nook nama-cranny. Ngokubuka kwezihlahla eziluhlaza kanye nezinkambu ezinyakazayo ehlobo, kanye nama-marsh-scapes anokuthula ebusika ungase ungafuni ukuhamba.
Jabulela ukucwiliswa kubhavu wethu we-clawfoot ngenkathi uphuza iwayini. Hlala kusofa wethu wakudala othokomele bese ubeka imuvi ku-Netlix. Noma lalela umculo ngenkathi usamukele abangani ekhishini lethu elivulekile lomqondo - indawo yokudlela enezitulo zebha.
I-SchoolHouse nayo iseduze kwendlela yokuhamba ebizwa nge-'Rails to Trails'. Ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya endaweni eyodwa kukuyisa e-Silver Lake enhle - kuyilapho uhambo lwamaminithi angu-35 ukuya kwelinye lukuyisa ngqo edolobheni lase-Sackville. Jabulela ukuhambahamba kanye nesidlo sakusihlwa edolobheni - futhi ungakhathazeki uma ungafuni ukubuyela emuva - I-Sackville Cab imane nje ihambile.
Sibheke ngabomvu ukuthi uhlale nathi!
4.87 · 147 okushiwo abanye
I-School House itholakala ekugcineni 'kweNdlela Yesikole' engaphandle nje kwe-Main St. Lena indawo ethule kakhulu enezindlu zezinhlamvu ezindala.
Kuwuhambo lwemizuzu engu-8 ukuya edolobheni laseSackville, noma uhambo lwemizuzu engama-40. Isikhala futhi siyimizuzu emi-5 ukusuka eSilver Lake enhle enolwandle, inkundla yokudlala kanye nedokodo.
Izivakashi zizozingenisa noma nini lapho zifika ngebhokisi lokukhiya eduze komnyango wangaphambili. Uma izihambeli zingena efulethini 'umhlahlandlela wokwamukela' uzozinikeza yonke imininingwane edingekayo ukuze zijabulele ukuhlala kwazo.
Uma izivakashi ziba neminye imibuzo okufanele zingangabazi ukungithinta - inombolo yami yocingo iyatholakala kumhlahlandlela wokwamukela :)
Izivakashi zizozingenisa noma nini lapho zifika ngebhokisi lokukhiya eduze komnyango wangaphambili. Uma izihambeli zingena efulethini 'umhlahlandlela wokwamukela' uzozinikeza yonke…